Semalt Expert: Zvaunofanira Kuziva NezveWebhu-Kuramba
Tsvaga injini dzinokwira zvinyorwa kuti zvivekwe paIndaneti. SEO-yakaitwa web materialszviri nyore kuwana. Zvisikwa zvepa XML mepu yepaiti inowana mapeji epawebsite akanyorwa, asi inoda kushandiswa kwakawedzerwa kweSEO iyo inoshandisa nzvimboinokambaira kuti ipe hupo hwezvakadiwa - blitzschnelles umziehen.
Nyanzvi ye Semalt Digital Services, Frank Abagnale anotsanangura zvinhu, izvo iwe unofanirwa kuziva pamusoro pewebsite yekunyorera.
Kunzwisisa zviri mukati me site
Kutamba neGoogle kunovimbisa kutarisa kwezvinhu zvakagadzirwa nemashokokuisa pawebsite. Zvikamu zvezvibereko zvinofanira kuenzanisirwa maererano nezvakagadzirirwa maitiro apo maitiro emapepa anofanira kunge arikusingagumi pasina kushandiswa, zvisikwa zvitsva kana kuiswa kwemaji asina kufanirwa.
Kusvetuka kunogona kudziviswa
Zvikanganiso zvakakonzera zvinokonzera kusakosha kwezvikamu zvemashoko mune imwe nzvimbokutsvaga kunogona kuitika nekuda kwekusakwanisa kwechikwadzi kuti apedze kuwana. Dzimwe nyaya dze SEO dzinogona kukonzera kukanganisa kwemaitiro kana kuchinjwaTsamba ye URL uye kusina hukuru firiji reji tsvaga. Cheketi mu robots.txt kana Noindex pasi rose inogona kubatsira kugadzirisa kuvhara kwechikwereti.
Kunzwisisa zvinowanzoregwa ma URL
Pasinei neSO yakarurama, dzimwe URL dzingarambwa nekuda kwe robots.txt. Kudzidza chiinzvimbo dzinogona kuwanika dzinoita kuti zvikwanisike kusiyanisa kukanganisa uye nemaune zvidzidzo zvechikwata..
Ziva zvikanganiso makumi mana
Kudzorera kukanganisa 404 kunogona kuitika nekuda kwekusakwanisa kuwana ruzivo rwakakwana rwekutsvagainjini dzinotora kana nzvimbo yacho haisiwe unindexed nekuda kwekuregererwa. Muteereri ane chinangwa chekuwedzera maitiro avo paIndaneti kuburikidza neSEO inofanira kuchengeta nekunyatsonzwisisa chikonzero chiri mushure mekukanganisa kweshoko kana vachifanira kuwana sarudzo.
Kunzwisisa munhu anokambaira uye kuti rinoratidzira sei kururamisa kunokosha kuderedzanhamba yekudzokorora musati kutsvaga injini inowana peji chaiyo inodiwa. Kutendeuka kwe 302 kudzokera kune 301 kunoita kuti kubuda kunenge kune 15chikamu chekuendeswa kune peji peji.
Tsvaga meta deta dzisina simba
Vanogadzira zvipfeko zvakanakisisa zvekutsvaga mazano asina kunaka pamusorowebsite. Vanoongorora kana mapepa ari maviri kana kuti ane meta dzisina kukodzera dzematare dzinoramba kushandiswa kwemaji kunyange ne SEOchiito cherobhoti Noindex.
Kuongororwa kwemashoko echinyorwa
Kubudiswa kwekare kwemashoko echinyorwa kunogona kuva nyaya yekudzokorora zvinyorwa,kana kushandiswa zvisina kururama. Kuongorora kwezvinhu zvakakosha pakutsvaga kuburikidza nekushandiswa kwevashandi vanovimbisa kusunurwa kwezvinyorwa zvinyorwa.
Tsvaga tsika yematare
Kushandisa RegEx kana XPath mukuwedzera kune vanocheka vanogona kupa zviratidzo zvemashoko uye zvikamu zve XML zvebhuku racho nejini yekutsvaga. Iyi chikamu cheSeO mechanism inoudza mucheki kuti atore zvakakoshazvikamu zvemashizha akadai semitengo, dhigirizhonga yedhesi, uye maikirwo ehupenyu.
Vakawanda vanogadzirira kushandisa Google Search Console uye Google Analytic zanakuti ipe ruzivo rwemapeji ose akambaira. Izvi zvinokurudzira kugadzirisa kwemashoko akatsvakurudzwa uye kupa kwe data inoda kuiswainoda ruzivo pane musha wekutsvaga.
Zvakanakisisa zvinoguma kubva kune vakwegura uye nzira dze SEO zvinoenderana nehuwandu hwewebsite,uye zviripo zvinowanikwa. Kuzivikanwa kwezvakakodzera zvokugadzira zvishandiso ndiro danho rokutanga kusvika pakuvepo kwepaIndaneti kunovimbiswakubudirira. Kuwana chikonzero chaicho chemashoko asina kuzarurwa kuburikidza nekuongorora kunogadzirisa nzira inogona kugadzirisa dambudziko racho.